HIV ပိုး ကူးစက်ခံရသူတွေအတွက် ရေရှည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လိုအပ်နေ
HIV ပိုး ကူးစက်ခံရသူတွေအတွက် ရေရှည် ပြန်လည်ထူထောင်...
30 พ.ย. 2562 - 23:47 น.
မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ပိုး ကူးစက်ခံရသူတွေ အနေနဲ့ အရင်ကဆိုရင် ဆေးမရလို့ အသက်ဆုံးရှုံးတာ ရှိခဲ့ပေမဲ့ အခုတော့ ဆေးအလုံအလောက် ရနေပြီလို့ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် HIV ပိုး ကူးစက်ခံရသူတွေအပေါ် အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာ ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုတွေ ရှိနေပြီး HIV ပိုး ကာကွယ်ဆေး သောက်နေတာ တွေ့လို့ အလုပ်ရှင်က အလုပ်ထုတ်ပစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ကြုံတွေ့ နေရဆဲပဲလို့ လူထုကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်တဲ့ မာရီစတုပ် ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာစစ်နိုင်က ပြောပါတယ်။
မိဘနှစ်ပါး ဆုံးပါးသွားခဲ့ပြီး အဲဒီ မိဘတွေဆီက ရောဂါ ကူးစက်ခံထားရတဲ့ ၁၃နှစ်အရွယ် HIV ဝေဒနာရှင် မိန်းကလေး တစ်ယောက် ဆိုရင် ကျောင်းအပ်ဖို့ လက်မခံတဲ့ အခြေအနေနဲ့ ကြုံခဲ့ရလို့ အဖိုးနဲ့ အဒေါ်တွေက လာရောက် အပ်နှံတာမျိုး ရှိခဲ့တယ်လို့ သုခရိပ်မြုံ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဂေဟာရဲ့ အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ ထားထား (ခေါ် ) စာရေးဆရာမ စုထားက ရှင်းပြပါတယ်။
အဲဒီမိန်းကလေးဟာ မိသားစု ဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နေသင့်ပေမဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့် လူငယ်ဂေဟာမှာ နေထိုင် ပညာသင်ကြားခဲ့ရပြီး အခုဆိုရင် ကျောင်းပညာ ဆုံးခန်းတိုင်လို့ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ ပညာဒါန ဖြည့်ဆည်းပေးနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သူတို့ ဂေဟာကို ရောက်လာတဲ့ ကလေးတွေထဲမှာ မိဘဆီက ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူတွေ ရှိသလို ဝေဒနာရှင် မိဘနှစ်ပါး ကွယ်လွန်သွားလို့ မိဘမဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် လာရောက် အပ်နှံထားတဲ့ ကလေးတွေလည်း ရှိတာကြောင့် အခုဆိုရင် စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ကလေးတွေ ၁၁၆ ယောက် ရှိတယ်လို့ သုခရိပ်မြုံ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဂေဟာကို ၁၅နှစ်ကြာ ထူထောင် လုပ်ကိုင်လာတဲ့ ဒေါက်တာ ထားထားက ပြောပါတယ်။
ဒီလို ကလေးတွေ ရှိတဲ့အနက် အခုအခါ အရွယ်ရောက်လို့ အတောင်အလက်စုံ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်နိုင်ပြီး ၁၈ နှစ်ပြည့်လို့ မိဘဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းထဲ ပြန်သွားကြသူတွေ ရှိသလို ပျက်စီးသွားလို့ အသိုင်းအဝိုင်းက လက်မခံတဲ့အတွက် ပြန်ရောက်လာသူတွေလည်း ရှိတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ရောဂါ မကူးစက်အောင် လိင်ဆက်ဆံရာမှာ အကာအကွယ်ယူသင့်
၂၀၁၈ ခုနှစ် စာရင်းဇယားတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရမှုအသစ် တစ်သောင်း တစ်ထောင် ရှိနေတယ်လို့ AIDS Data Hub စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ စုစုပေါင်း နှစ်သိန်း လေးသောင်း ရှိနေပြီး အသက်ဆုံးရှုံးရသူ ခုနှစ်ထောင့်ရှစ်ရာ၊ ရောဂါပိုး ကူးစက်ပေမယ့် အသက်ရှင် ကျန်ရစ်သူ သုံးထောင့်နှစ်ရာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီလို ဖြစ်ပွားမှုတွေမှာ လိင်ကူးစက်မှုကတဆင့် ကူးတာက အဓိက ဖြစ်ပြီး မူးယစ်ဆေး ထိုးသွင်းမှုတွေကနေ ကူးစက်တာကလည်း ခုချိန်ထိ ရှိနေတယ်လို့ မာရီစတုပ် ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ စစ်နိုင်က ပြောပါတယ်။
ကွန်ဒုံးသုံးခြင်းက ရောဂါကူးစက်မှု မဖြစ်အောင် ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ဆို
တဆင့် ကူးစက်ခံ အမျိုးသမီးထု ဘဝ
အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင် မူးယစ်ဆေး သုံးလေ့မရှိပေမယ့် နေထိုင်မှု ဓလေ့ထုံးစံအရ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ၊ လက်တွဲဖော်၊ သမီးရည်းစားတွေက မူးယစ်ဆေးထိုးတာ၊ ပြည့်တန်ဆာ တွေဆီ သွားတာ စတဲ့ ကျိုးကြောင်း ဆက်နွယ်မှုတွေဆီကနေ HIV ပိုး ကူးစက်ခံရလေ့ ရှိကြတယ်လို့ HIV ပိုး ကူးစက်ခံရသူတွေကို ကယ်ဆယ် ကူညီရေး လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ အရပ်ဘက်အဖွဲ့တွေက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရောဂါ ဖြစ်ပွားတဲ့ အမျိုးသားတွေ သေဆုံးသွားတဲ့ အခါမှ အမျိုးသမီးတွေက သိရပေမဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ကူးစက်ခံနေရပြီ ဆိုတာ သိသိချင်း ကုသမှု ခံယူကြတဲ့ အတွက် အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေက အသက်ဆုံးရှုံးမှု နည်းတယ်လို့ ဒေါက်တာ စစ်နိုင်က ပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်ထက် တဆင့်ကူးစက်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ရောဂါ ကူးစက်မှု အန္တရာယ်ကို ကိုယ်တိုင် မကျူးလွန်ပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖက် ခင်ပွန်း၊ ချစ်သူရည်းစားကနေ ရောဂါ ရနိုင်တယ် ဆိုတာကို သိထားဖို့ လိုပြီး ကိုယ့်လက်တွဲဖော်က ဘယ်လို အခြေအနေ ရှိလဲ၊ ဘယ်လောက် အန္တရာယ် ရှိလဲ ဆိုတာကို သုံးသပ်ဖို့ လိုတယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လိုအပ်တဲ့ ကာကွယ်ရေးကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရဲရဲ တင်းတင်း လုပ်ဖို့ ဒေါက်တာ စစ်နိုင်က အမျိုးသမီးထုကို တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်း မှာတော့ ကိုယ်၀န်ဆောင်ကနေ ကလေးတွေဆီ ကူးစက်မှု အလွန်နည်းလာတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ART ဆေး အလုံအလောက် ရပြီလား
HIV ပိုး ကူးစက်ခံရသူကို ကူညီ စောင့်ရှောက်ဖို့ အခုအခါ အစိုးရ ကျန်းမာရေး ဌာန ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ လူမှု ကယ်ဆယ်ရေး အဖွဲ့တွေအကြား ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းလျက် ရှိပါတယ်။
လက်ရှိ ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေသူ နှစ်သိန်း လေးသောင်း အနက် တစ်သိန်း ခုနှစ်သောင်း ကတော့ ဆေးအခမဲ့ ရပေမဲ့ တခြား လိုအပ်တဲ့ ကုသမှုတွေကို အခြေအနေအလိုက် ကိုယ့်အိတ်ထဲက စိုက်ထုတ်ရတာ ရှိနေ တယ်လို့ ဒေါက်တာစစ်နိုင်က ပြောပါတယ်။
ခွဲခြား ဆက်ဆံမှု မရှိအောင်
HIV ပိုးကူးစက်ခံရသူတွေကို လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းကနေ ဖယ်ထုတ်ထားမှုတွေ ဆက်ရှိနေဆဲပဲလို့ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းက ပြောပါတယ်။
ဒါတွေ ပပျောက်သွားအောင် ရေတိုအနေနဲ့ ဖြစ်ရပ်အလိုက် လိုက်လံ ဖြေရှင်းမှုတွေ လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ ဒေါက်တာ စစ်နိုင်က အကြံပေးထားပါတယ်။
ရေရှည်အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ HIV ပိုး ကူးစက်ခံရသူတွေကို ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ် ပေးမှုတွေ လုပ်ပေးဖို့ လိုနေသလို လူ့ဘောင် အသိုင်းအဝိုင်းက လက်ခံ လာအောင် ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ပေးဖို့ သူက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
HIV ပိုးကူးစက်ခံရသူတွေဟာ ထိရောက်တဲ့ ART ဆေးသောက်မှုတွေ လုပ်ဆောင်မယ် ၊ ကုသမှုတွေ ခံယူမယ် ဆိုရင် တခြားသူဆီ ကူးစက် နိုင်ချေ မရှိသလောက် ဖြစ်တာကြောင့် ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရသူတွေကို အသိုင်းအဝိုင်းထဲက ဖယ်ကျဉ် မထားဖို့ လူမှု ကူညီရေး သမားတွေက အကြံပေး ထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ HIV ပိုး ကူးစက်ခံရသူတွေအတွက် ရေရှည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လိုအပ်နေ